के हो क्यान्सर ? यसका लक्षणहरु के के हुन् र यसको उपचार कसरी गर्ने ?
डिसेम्बर 6, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments उपचार, क्यान्सर, डा. राम बहादुर बोहरा
क्यान्सर सुन्दा नै डरलाग्दो रोगको श्रेणीभित्र पर्दछ । यो रोगले मानिसलाई बाँच्न पाउने अधिकार छिनेको छ । उपचार गर्दा गर्दै जनतालाई मात्र होइन डाक्टरलाई समेत छोडेको छैन । सरकारले जनतालाई सहयोग गर्न सक्दैन असमर्थ छ ।
‘क्यान्सर’ भयावह रोग, जसको उपचार महंगो मात्र नभई कतिपय अवस्थामा असम्भव हुने गर्छ । जब शरीरमा खराब कोशिकाहरु बढ्न थाल्दछ र क्यान्सर पैदा गर्दछ । हाम्रो शरीरमा दिनहुँ कैयौं कोशिका जन्मने र मर्ने क्रम चलिरहेको हुन्छ ।
जब प्रदूषण, खराब खानपान, जीवनशैलीका कारण उक्त कोशिका पैदा गर्ने डिएनएमा असर पुग्छ, कोशिका जन्मने र मर्ने स्वभाविक प्रक्रियामा बाधा पुग्छ । त्यसले शरीरमा खराब कोशिकाको बृद्धि गर्छ । यहि नै क्यान्सरको कारण बन्छ ।
क्यान्सर रोगका लक्षण विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । शरीरको कुनै अंगमा फोका वा गाँठो देखा पर्नु, अचानक शरीरको कुनै भागबाट रगत बग्नु, छालामा असामान्य परिवर्तन आउनु, भोक कम लाग्नु, बढी खोकी लाग्नु, खोकीमा रगत देखा पर्नु यसका सामान्य लक्षण हुन् ।
यदी शरीरको कुनै पनि अंगमा कुनै पनि रोगको लक्षण देखापरेको १ महिनासम्ममा उपचार गर्दागर्दै पनि निको भएन भने एकपटक क्यान्सर रोगको अनिवार्य परिक्षण गराउन आवश्यक छ ।
आज मैले होम्योपैथीकबाट सामान्य लक्षणमा यो औषधिले राम्रो फाइदा गर्दछ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्न गइरहेको छु । यस प्रकारका औषधि सस्तो हुनाले दुखि गऱीबले समेत फाइदा उठाउन सक्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । क्यान्सरको उपचार गर्न प्रयोग गरिने होम्योपैथीक औषधिहरु यस प्राकर छन् :
१. कैल्कैरिया-फ्लोर (CALCARIA-FLOR)
ब्रेष्ट क्यानसरको पहिलो अवस्थामा भएको घाउ ट्युमर बाट क्यान्सर हुन बाट रोक्दछ ।
मात्रा:४ गोली दिनमा ४ पटक खान दिने ।
२. कोनियम-मैक (CONIUM-MAC)
ट्युमर ढुङ्गा जस्तो सारो लक्षण देखिएमा र अत्यधिक दुखाई भएमा या ब्रेष्ट क्यान्सरमा यो औषधिको सेवनले राम्रो फाइदा गर्दछ ।
३. थूजा (THUJA)
कुनैपनि प्रकारको ट्युमरमा थूजा बहुमुल्य औषधि मानिएको छ । क्यान्सर लगाएत अन्य समस्या आखो, कारबंकल, अल्सर, मुसा, पोलीफ र सार्कोमा राम्रो फाइदा गर्दछ ।
४. साइलीसिया (SILICEA)
यो औषधिको प्रयोगले जस्तोसुकै फाइब्रोइड, ट्यूमरलाई ठिक गर्दछ । नपाक्ने जस्तोसुकै घाउलाई पकाउदछ । यो औषधिले क्यानसरको दुखाईलाई समेत कम गर्दछ ।
← हात खुट्टामा आउने मुसा र यसको उपचार
के हो धर्म संस्कृति रामरी बुझौ ? →
जनवरी 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
फ्रेवुअरी 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक 8